Mukhtaar Suubane oo la Xabisay – Rasaasa News
Jijiga, October 23, 2014 – Mukhtaar Sheekh Maxamed Suubane oo horjooge u ahaa maleeshiyada Liyuu Booliska ayaa shaqadii laga caydhiyey. Mukhtaar Sheekh Maxamed Suubane oo ahaa gacanyaraha madaxwayne Abdi Mohamud Omar ayeyna wali cadayn sababta shaqada looga caydhiyey iyo cida ka caydhisay.
Mukhtaar Sheekh Maxamed Suubane ayaa ka mid ah shakhsiyaadka gabood falka cad cad ka gaystay degaanka Soomaalida Ogadeeniya mudadii uu ahaa horjoogaha Liyuu Booliska.
Mukhtaar Sheekh Maxamed Suubane inta uusan ku soo biirin 2010-kii Maleeshiyada Liyuu Booliska wuxuu ka tirsanaan jiray ciidanka wadaniga xoraynta Ogadeeniya [CWXO].
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in lagu xidhay Mukhtaar Sheekh Maxamed Suubane Jeel-Ogadeen. Jagadii uu ka hayey maleeshiyada Liyuu Booliskana waxaa loo dhiibay labo xidigle Xaabsade. Waxaa la filayaa in horjoogayaal kale oo ka tirsan maleeshiyada Liyuu Booliska xabsiga loo diro maamaha soo socda.
Shakhsiyaadka dhibaateeya shacabka Somalida Ogadeeniya, ayaa ku dambeeyaan dhibaato iyo magac xumo ay qoomameeyaan inta ay nool yihiin.
Xaalada maamul ee Kilalka ayaa baryahan dambe aad looga dayrinayaa, ka dib kolkii ay madax isla galeen horjoogayaasha Kilalku. Warar hoose ayaa sheegaya in ayna wax shaqo ah ka socon Kilalka, lana filayo in arintani ay sii socon doonto inta laga gaadhayo bisha May 2015, xiligaas oo la filayo in ruux loo magacaabi doono Kilalka.